चामल आयात दोब्बर बढ्यो, दुई महीनामा रु. ४३ अर्ब ६० करोडको कृषिवस्तु आयात:: Naya Nepal
चामल आयात दोब्बर बढ्यो, दुई महीनामा रु. ४३ अर्ब ६० करोडको कृषिवस्तु आयात
गत साउन र भदौ दुई महीनामा देशले रु. ७ अर्ब ५२ करोडको धानचामल आयात गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा झण्डै दोब्बर बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो दुई महीनामा जम्मा रु. ३ अर्ब ८० करोडको मात्रै धानचामल आयात गरेको थियो।
कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटका कारण देशमा खाद्यान्नको अभाव हुनसक्ने अनुमानपछि व्यापारीले आयात बढाएका हुन्। अर्कातिर, बन्दाबन्दीका बेला आयातमा व्यवधान पुगेका कारण पनि साउनपछि एकैपटक आयात हुँदा परिमाण र रकम धेरै देखिएको हो।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, यो दुई महीनामा देशले रु. १३ अर्ब ७४ करोडको खाद्यान्न आयात गरेको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा रु. ७ अर्ब ५ करोड मात्रै थियो।
तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महीनामा देशले करीब रु. ४३ अर्ब ६० करोड मूल्यको कृषिवस्तु आयात गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिमा रु. ३८ अर्ब ७७ करोडमा सीमित थियो। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेर अन्य वस्तुको आयात ह्वात्तै घटेपनि कृषि वस्तुको आयात भने झन् बढेको छ।
पहिलो दुई महीनामा देशको समग्र आयात करीब २२ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ।
साउन–भदौ दुई महीनामा रु. ६ अर्ब ५ करोडको तरकारी आयात भएको छ, जुन गत वर्षको यही अवधिमा रु. ५ अर्ब ४५ करोडको आयात भएको थियो।
यो अवधिमा देशको कृषिजन्य वस्तुको निर्यात पनि बढेको छ। साउन–भदौ दुई महीनामा रु. १० अर्ब ७७ करोड मूल्यका कृषिवस्तु निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रु. ८ अर्ब ६७ करोड मूल्य बराबरका कृषि वस्तुको निर्यात भएको थियो।
गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला दसैंमा पनि निर्माण निरन्तर
सधै दर्शकलाई किन सुवाउछिन शान्ति श्री परियारले सबैलाई रुवाउदा आफै यस्तो (हेर्नुस् भिडियो)
लोभी सरकार : ढुकुटीमा पैसा छ, संक्रमितको उपचार गर्दैन
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको असनमा शाखा
फेरि बढ्यो प्याजको मूल्य, कति पुग्यो ?